होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / फेसबुकमा हरिवंश र नम्रता अगाडि
फेसबुकमा हरिवंश र नम्रता अगाडि	02 Aug 2013 | 10:57am शुक्रबार १८ श्रावण, २०७०
काठमाडौं - अभिनेता हरिवंश आचार्यलाई फेसबुक चलाउने फुर्सद छैन होला, जबकि उनी नेपालमा सबैभन्दा ज्यादा फेसबुक फ्यान भएका सेलिब्रेटी भएका छन्। १९ लाख नेपालका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये फेसबुकमा उनको पेज लाइक गर्ने संख्या २ लाख ७२ हजार रहेको छ। नेपालीले मन पराउने समग्र देशीविदेशी सेलिब्रेटीको सूचीमा भने हरिवंश चौथो नम्बरमा रहेका छन्। कोलम्बियन गायिका सकिरा, अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट र भारतीय अभिनेता सलमान खान क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको फेसबुक तथ्यांक राख्ने वेवसाइट सोसल बेकरले देखाएको छ। पछिल्लो समय आत्मसंस्मरणात्क कृति 'चिना हराएको मान्छे'का कारण साहित्य सेलिब्रेटीका रुपमा स्थापित आचार्यको पेज लाइक गर्ने संख्या निरन्तर बढ्दो छ। हरिवंशले पनि पुस्तकको बिक्री संख्या ६० हजारको हाराहारीमा पुग्नुमा फेसबुकको भूमिकालाई नकार्दैनन्। 'फेसबुकमा व्यक्त भएका क्रिया प्रतिक्रियाले पुस्तकको बिक्रीमा धेरै प्रभाव पारेको अनुभव गरेको छु। धेरै बेर चलाएर बस्ने फुर्सद त हुँदैन तर हप्तामा एक दिन भए पनि फेसबुकमा बस्ने योजना बनाएको छु,' आचार्यले भने। आचार्यले फेसबुक साथीले गरेका टिप्पणीले पुस्तकका हरेक संस्करण सुधार्न मद्दत पुगेको पनि बताए।हरिवंशपछि नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच र्या पर यम बुद्ध लोकप्रिय रहेका छन्। उनलाई नेपालमा मात्र मन पराउने फ्यानको संख्या १ लाख ३५ हजार रहेको छ। तर विदेशमा समेत गरी उनको पेज लाइक गर्ने संख्या भने १ लाख ७० हजार छ। र्या पर यम बुद्ध टिनेजरका बिच लोकप्रिय मानिन्छन्। सार्वजनिक रुपमा खासै नचिनिएका यम बुद्धलाई फेसबुकमा यति धेरैले मन पराउनुले फेसबुक प्रयोगकर्ताको भिन्न चरित्र झल्काउँछ। नेपालीहरुले रुचाउनेमा यम बुद्ध अगाडि भए पनि विदेशी प्रयोगकर्ताको समेत लाइक जोड्दा भने अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ हरिवंशपछि सबैभन्दा बढी फेसबुक फ्यान भएकी सेलिब्रेटी हुन्। उनको पेजलाई लाइक गर्ने संख्या १ लाख ७१ हजार छ। नेपालबाट मात्र भने उनलाई १ लाख २७ हजार फ्यानले लाइक गरेका छन्। तर नम्रता आफैं यो पेजकी एडमिन भने होइनन्। उनका सहयोगी भाइ प्रदीपले पेज रेखदेख गर्ने गरेका छन्। २००९ देखि फेसबुकमा सक्रिय नम्रता आफैंले भने प्रोफाइल पेज मात्र हेर्ने गरेकी छिन्। जहाँ उनका ५ सय जति फ्रेन्ड छन्।आधा दर्जनभन्दा फेक आइडीबाट पीडित नम्रतासँग पनि फेसबुकले प्रमोसनमा निकै फाइदा पुर्याजएको अनुभव छ। '१ लाखभन्दा बढी फ्यान हुनु भनेको गौरवको कुरा हो। तपाईं एकैचोटि १ लाख मानिसलाई आफ्नो कामको बारेमा सूचित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गरेको कामको प्रतिक्रिया क्षणभरमै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ,' नम्रताले भनिन्। हाल 'मौन' तथा 'मेघा'को काममा व्यस्त नम्रताले यी फिल्मलाई पनि फेसबुकबाटैै प्रमोट गरिरहेकी छिन्।पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाको पेजलाई मन पराउनेको संख्या १ लाख ६९ हजार छ। सुब्बालाई नेपालबाट लगभग १ लाख २८ हजार प्रयोगकर्ताले मन पराएका छन् भने बाहिरी देशका ४१ हजारले उनको पेज फलो गर्ने गरेका छन्। त्यसो त सुब्बा फेसबुकमा सक्रिय रहने थोरै सेलिब्रेटीमध्ये पर्छिन्। फेसबुकबाट तितामिठा दुवैखाले अनुभव सँगालेकी सुब्बा २०१० देखि फेसबुकमा सक्रिय छिन्। सुरुसुरुमा पुरुष फ्यानका अश्लील सन्देश तथा कमेन्टबाट आजित सुब्बा त्यस्ता फ्यानलाई निकालेपछि भने सामाजिक सञ्जालले फाइदै पुर्यानएको अनुभव सुनाउँछिन्।'फेसन र ग्ल्यामरभन्दा सामाजिक काम सम्बन्धी स्ट्याटसमा फ्यानको लाइक बढी हुन्छ। यसले सार्थक काम गरिरहेको अनुभूति हुँदोरहेछ,' सुब्बाले भनिन्। माल्भिकाले आजभोलि फेसबुक फोरमबाटै 'चाइल्ड रिच नेपाल' र 'हाम्री बहिनी' नामक सामाजिक अभियानलाई प्रमोट गरिरहेकी छिन्।समग्र फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच नेपालका संगीतिक ब्यान्डहरु लोकप्रिय रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ। दि एज ब्यान्डको पेजलाई १ लाख ५१ हजार लाइक गर्नुले यस्तै चित्र प्रस्तुत गर्छ। कुटुम्ब, अल्बाट्रस, नेप्साइडज नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाइक गरेका ब्यान्डहरु हुन्। कुटुम्बलाई लगभग १ लाख ६ हजार फ्यानले लाइक गरेका छन् भने अल्बाट्रसलाई १ लाख १ हजारले मन पराएका छन्। नेप्साइडजलाई लाइक गर्नेको संख्या लगभग ६८ हजार छ।फेसबुक प्रयोगकर्ताले धेरै लाइक गर्ने पेजमा रेडियो जक्की तथा गायिका सबिना कार्कीको पेज पनि अटाएको छ। उनको फेसबुक पेजमा ७५ हजारले लाइक दिएका छन्। उनलाई नेपालबाट लाइक गर्नेको संख्या ५६ हजार छ भने बाँकीका फ्यानले अमेरिका, भारत, कतार जस्ता देशबाट लाइक गरेका छन्।कुनै पनि सेलिब्रेटीको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा हुने फ्रेन्डस् र फलोअरले तय गर्ने प्रचलन बढ्दो क्रममा छ। यस्तोमा नेपाली सेलिब्रेटीले पनि फेसबुक फ्यान बढाउन प्रयत्न थाल्ने हो कि? नत्र त आफू लोकप्रिय छु भन्ने डम्फु आफैंले मात्र बजाए जस्तो होला कि? « हिरोहिरोइन सांकेतिक भाषामा
मुकेश र कल्पना पतिपत्नी ! »